दशैंअघि विद्यालय खाेल्ने अवस्था नरहेको शिक्षामन्त्रीको भनाइ – Butwal Sandesh
दशैंअघि विद्यालय खाेल्ने अवस्था नरहेको शिक्षामन्त्रीको भनाइ
नेपाल सरकारले कोरोना भा*इरस (कोभिड १९) को सं*क्रमणको जो*खिम बढ्दै गएपछि एसईई परीक्षालाई स्थगन गरी विद्यालयहरुको आन्तरिक मूल्याङ्कनका आधारमा राष्ट्रिय परीक्षा वोर्डले प्रमाणपत्र जारी गर्ने निर्णय गरेको छ । सोही अनुसार शिक्षा तथा जनसंख्या मन्त्रालयले तयारी शुरु गरेको छ । तर कक्षा ११ र १२ को परीक्षा भने के गर्ने भन्ने सम्बन्धमा सरकारले अझै निर्णय गरेको छैन ।
शिक्षा तथा जनसंख्या मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले केही समयपछि परिस्थितिको थप मूल्याङ्कन गरी निर्णय गरिने बताउँदै आउनुभएको छ । यस्तै अर्थतन्त्रका केही क्षेत्रहरुलाई खोल्ने निर्णय गरेपनि विद्यालय शिक्षा सञ्चालन गर्ने विषयलाई सरकारले सबैभन्दा पछिल्लो चरणमा राखेको छ । तर असार १ गतेदेखि सिकाईलाई निरन्तरता दिने कार्यक्रमहरु विद्यालयले सञ्चालन गर्न सक्ने पनि सरकारले बताउँदै आएको छ । मन्त्री पोखरेलले कोरोनाको सं*क्रमणको अवस्था न्यून नहुँदा सम्म विद्यालयहरु नखुल्ने बताउनुभएको छ । सिकाईलाई निरन्तरता दिएपछि के निजी विद्यालयहरुले भर्ना लिन पाउने हुन ? के दशैं अगाडि विद्यालय सञ्चालन गर्न सक्ने अवस्था आउँछ ? यिनै विषयमा केन्द्रित रहेर शिक्षा तथा जनसंख्या मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलसँग गरिएकाे कुराकानी :
मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णय प्रमाणित भएर आउन बाँकी छ । दोस्रो कुरा के हुन्छ भने एसईईको परीक्षाको सन्दर्भमा २८ सालको शिक्षा ऐन छ त्यसको आठौं संशोधनपछि यि व्यवस्थाहरु गरिएका छन् । त्यसैले ऐनले नै व्यवस्था गरेको छ । हामीले बाधा अडकाउलाई टेकेर, सं*कटलाई ध्यान दिएर यो निर्णय गरेका छौं । त्यसकारणले यो निर्णयको औपचारिक रुपमा राजपत्रमा पनि छापिनुपर्छ । त्यसैले केही दिन हामी पर्खन्छौं । हामीले कसरी सोचेका छौं भने अब सं*क्रमण बढ्दै गएको, तीन हजार भन्दा माथि स्कूल क्वारेन्टाइनमा बदलिएको, विद्यार्थीहरुको मनोवैज्ञानिक समस्याहरु देखा पर्न थालिराखेको, दुई महिना भन्दा बढी समय बितेको छ र अझै आगामी दुईमहिना सं*क्रमण बढ्दै जाने आँकलन गरिएको हुनाले परीक्षामा आधारीत भएर सोच्न सकिएन। त्यसैकारणले हामीले अहिले विद्यालयले गरेको आन्तरिक मूल्याङ्कनलाई मान्यता दिने गरेर राष्ट्रिय परीक्षा वोर्डले प्रमाणित गरिदिनुपर्छ । त्यो प्रक्रियामा हामिले अब हाम्रो तल शिक्षा तथा समन्वय इकाई छ । स्थानीय तहलाई विद्यालय शिक्षाको जिम्मेवारी दिएको छ त्यहाँ पनि शिक्षाका समितिहरु छन् । अनि फेरी के छ भने हाम्रो ऐनपछि कार्य विस्तृतिकरणको जे व्यवस्था गरिएको छ त्यसले १० कक्षाको परीक्षालाई प्रदेशलाई जिम्मा दिएको छ । यो सबै पक्षलाई हेरेर राष्ट्रिय परीक्षा वोर्डले एउटा कार्यविधि बनाउँछ मूल्याङ्कनको पनि । त्यो कार्यविधिमा आधारित भएर यो प्रक्रिया अगाडि बढ्छ । त्यसैले मैले यति भन्न सक्छु परीक्षा हुँदैन । विद्यालयले गरेको अन्तरिक मूल्याङकनलाई आधारित गरेर एउटा निश्चित कार्यविधिको आधारमा यसलाई व्यवहारिक ढंगले गरिन्छ । मेरो बुझाइमा झण्डै १ महिना जतिमा यो सबै कुराहरु राजपत्रमा छापिएर आइसकेपछि काम सक्छौं भन्ने मन्त्रालयको बुझाई छ । मन्त्रालयले अरु आन्तरिक छलफल पनि गरेको छ । तर कार्यविधि बनाउने जिम्मा चाहिं राष्ट्रिय परीक्षा वोर्डलाई छ ।
अहिले स्कूलहरु खोल्ने कसैले आफै निर्णय गर्न पाउँदैन् । कतिपयले मिडियामा मैले सुने १ गतेदेखि स्कूल खोल्दै छन् यो कुरा होइन फेरस हामी भन्दैछौं कि अहिले स्कूलहरु खोल्ने अनुमति दिइएको छैन। एक गतेदेखि हामीले सिकाईलाई निरन्तरता दिने अभियान सञ्चालन गरेका छौं । यो चारवटा पद्धतिको आधारमा यो अभियान सञ्चालन गछौं । पहिलो चाहिं पाठ्यपुस्तक घरघरमा पुर्याउने र अतिरिक्त सामग्री पुर्याउने । दोस्रो कुरा एफएम र रेडियोहरुबाट पठन पाठन गर्ने जो हामीले नाकाबन्दीको बेलामा पनि मधेस तराईमा गरेका थियौं ।
यतिखेर हामी सबैले वि*पदको बेलामा मिलेर काम गर्ने हो । राष्ट्रको लागि काम गर्ने हो । आफ्ना वरिपरि भएकाहरुका लागि काम गर्ने हो । सबै परिस्थितिमा यो नाफा नोक्सानको आधार मात्रै हेर्ने होइन देशको लागि हामीले काम गरेका छौं भन्ने कोणबाट सोच्नुपर्छ । अब हामीले अहिले असार १ गतेदेखि यो अभियान चलाउनुस भनि रहँदाखेरि यसमा कुनै व्यवहारिक कठिनाइहरु आए भने स्थानीय सरकारसँग उहाँहरुले संयोजन गर्नुपर्छ । हामीले यो निर्णय गर्यौं कास्कीकाे एउटा नगरपालिकाले अनलाइन कक्षा नै बन्द गरिदियो उदाहरणको लागि । यो कार्यान्वयन त फेरि स्थानीय तहमार्फत नै हुन्छ । हामीले त यो कार्यविधि बनाएर, मापदण्ड बनाएर गएका छौं ।